Horudhac: Burnley vs Man City… (Sky Blue oo eegeysa inay ka soo kabato barbarihii Newcastle oo ay soo yareyso farqiga dhibcaha hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Liverpool) – Gool FM
(Burnley) 03 Dis 2019. Kooxda Manchester City ayaa u safreysa Burnley caawa oo Talaado ah, iyagoo raadinaya inay sii wataan rajadooda guuldarro la’aanta kaddib dib u dhac kale oo Sabtidii ku dhacay.
Barbarihii 2-2 oo Newcastle United ay kala kulmeen ayaa ka dhigtay in Kooxda Tababare Pep Guardiola ay 11-dhibcood ka dambeeyaan hoggaamiyaha horyaalka Premier League haatan ee Liverpool kaliya 14 kulan oo la ciyaaray, iyadoo kooxda difaacanaysa horyaalka ay cidiyaha ku dagaali doonaan kulanka caawa.
Taariikhda: Talaado, 03 Dis 2019
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 11:15 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Laacibka khadka dhexe ee Kooxda Burnley, Ashley Westwood ayaa hal kulan la ganaaxay, laakiin weli waxa uu maqnaan karaa kulankiisii 200-aad ee Premier League sababtoo ah waxa uu sheeganayaa dhaawac gumaarka ah.
Charlie Taylor waxaa shaki kale la galinayaa kaddib markii uu dhaawac muruqa ah soo gaaray bilowgii isbuuca, laakiin Erik Pieters waa inuu taam noqdo.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester City, Ilkay Gundogan ayaa kulanka caawa ganaax ku seegi doona.
Man City ayaa dhaawac ku weynaysa Weeraryahankeeda Sergio Aguero, kaasoo sidoo kale aan taam u noqon doonin kulanka Sabtida soo aaddan ee Manchester Derby, kaasoo ay la dheeli doonaan Kooxda Man United.
Aguero ayaa dhaawac bowdada ah qaba, macallin Pep Guardiola ayaana yiri: “Isagu diyaar uma noqon doono kulanka Derby-ga, laakiin Derby-ga kaddib waan arki doonnaa.”
>- Kooxda Burnley ayaa guulaysatay kaliya hal jeer 10-keedii kulan ee Premier League oo ay la ciyaareen Manchester City, waxaana ay kala kulmeen 3 Barbaro iyo 6 guul, halka kulan oo ay garaaceen ayaana ahaa 1-0 ay uga badiyeen kulan ka dhacay garoonka Turf Moor bishii Maarso sanadkii 2015-kii.
>- Ma jiro kulan barbaro ku dhammaaday 14-kii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay kooxda Burnley ku ciyaartay garoonkeeda, iyadoo Clarets ay guuleysatay todobo ka mid ah kulammadaas, halka todobada kale laga badiyey.
>- Kooxda Manchester City ayaa guul la’aan ah labadeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda, waxaana mid 3-1 uga soo adkaatay Liverpool, halka kulanka kale ay barbaro 2-2 ka soo qaateen Newcastle, hal marka kaliya ayaa inta ay ka hoose ciyaarayaan macallin Pep Guardiola ay la kulmeen inay saddex kulan oo xiriir ah soo adkaan waayaan waana bishii Febraayo sanadkii 2018-kii, iyadoo kulanka saddexaadna ay Sky Blue la ciyaarayso caawa Burnley oo ay guuldarro ka soo gaartay kulankeedii ugu dambeeyey kooxda Crystal Palace.
>- Man City ayaa laga dhaliyey ugu yaraan labo gool labadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay bannaanka ku soo ciyaartay kulammada horyaalka, lagamana dhalin labo gool ama wax ka badan saddex kulan oo xiriir ah oo ay marti yihiin (Away) tan iyo markii afar kulan oo xiriir ah goolal labo ama ka badan laga dhaliyey bishii April sanadkii 2011-kii.
>- Tan iyo markii ay Burnley u soo dalacday markeedii ugu dambeysay Premier League sanadkii 2016-kii, Man City ayaa guuleysatay shan kulan oo horyaalka ah oo ay ka horyimaadeen iyaga, xiddiga hadda ka dhaawacan ee Sergio Aguero ayaana dhaliyey goolka guusha ay uga qaateen dhammaan shantaas kulan.
>- Kevin De Bruyne ayaa gacan ka gaystay goolal badan oo horyaalka Premier League waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo kale oo kooxda Manchester City ah, waxa uu dhaliyey 4 gool isagoo caawiyey 9 gool oo kale 13 kulan oo uu ciyaaray, xiddiga reer Belgium ayaana eegaya inuu saddex kulan oo xiriir ah goolal ka dhaliyo horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii October sanadkii 2015-kii.